Maqaal,Hamiga Geele iyo Humaaga Xasan iyo Hanqaltaaga Silaanyo | Welcome to RealTaleex.com
Maqaal,Hamiga Geele iyo Humaaga Xasan iyo Hanqaltaaga Silaanyo
December 18, 2012 | Filed under: Maqaallo | Posted by: admin UK:-(RT)Afka Soomaaliga xuskiisu ma waxa uu soo dhaweeyey aqoonsiga Soomaliada Waqooyi” tan iyo markii soomaaliya ay bur burtay waxaa aad jahwareer loogu jiray sidii dawlad soomaaliyeed oo loo mideysan yahay u imaan lahayd soomalina dib calankeeda ugu taagan lahayd iyadoo gacmaha is haysata.
Waxaa si weyn shacabka soomaaliyeed ay u filayeen bur burkii ka dib dawlado daris ah oo dad soomaali asal ahaan ka soojeeda ay madax ka yihiin dawladihii hore ee soomaaliyana ay abaal ku lahayeen xitaa xoreynteeda in ay gacmo walaalnimo iyo caqli wada jira ay ku dhex dhexaadiyaan walaalaha soomaalida ah ee bur buray oo dhibaato weyni la soo kulantey qaranimadoodii iyo jiritaankoodii.
Jabuuti waa dawlad yar oo ka mid ahayd Soomaali weyn lakiin gumeystihii soomaaliya kala qaybiyey uu ka gooyey kana dhigtay dawlad gooni ka ha Somaaliya taasi oo jaanis u siisay in ay noqoto mid ka badbaada dhibaatadii ku dhacdey walaalahooda Soomaalida ah.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa siyaasi si weyn looga ixtraamo Soomaalida dhexdeeda ahna rugcadaa ku soo jiray arimaha soomaalida mudo isku dayo badan oo dawlad soomaali leedahayna sameeyey taas oo keentay in shacabka soomaaliyeed ay u arkaan shakhsi ka damqanaya dhibaatada soomaaliya ku habsatay 22 sano.
Waxaase layaab leh Madaxweyne Ismaciil in ay Soomaalidu isku si u aragto lakiin isagu uu isku si u arag waxaana arintaa daliil u ah dhismihii dawladii “Carta” oo han weyn ay Soomaalidu ku qabtey lakiin isagu dano gaar ah ka lahaa dhismaha dawlad soomaaliyeed oo Jabuuti maslaxdeeda ka heli karto.
Cabdi qaasim Salaad xasan oo madaxweyne ka ahaa dawladii carta markii la soo doortey ismaciil cumar waxaa uu geed dheer iyo mid gaaban u fuulay sidii uu ugu guuleysan lahaa in soomaaliya fikirkiisa iyo caqligiisa uu ku maamulo isagoo eegaya maslaxad qabiil iyo mid qarankiisa jabuuti u daneynaysa.
Safarkii ugu horeyey ee madaxweyna Xasan sheikh uu ku tagey Jabuuti waxaa Ismaciil Cumar Geele uu yiri waxaan gudoon siiyey bilada Jabuuti ugu sareysa iyadoo aan u gudoonsiiisay laba siyaabood oo kala ah.
1. In madaxweynaha Somaaliya uu safarkiisii ugu horeeyey ka bilaabey dawlada Jabuuti Casimadeeda Jabuuti.
2. In uu yahay madaxweynihii ugu horeeyey markii ay ka baxdey Soomaaliya ku meel gaarka oo soo booqda Jabuuti
waa sida uu hadalka u dhigay. lakiin ma ah xaqiiqadu sidaa waa dhiiri galinta arimhii uu horey u wadey oo ahaa kala qeybinta qabiilada Soomaaliya.
U daneynta danaha gaarka ah ee dawlada Jabuuti ka leedahay Soomaaliya taas oo ah in Dawlada Jabuuti ay hesho mashaariicda dib u dhiska Soomaaliya sida Ciidamada tababarkooda iyo qalabeyntooda iyo mashruuca ka hortaga burcad badeeda oo jabuuti ay aad u dooneyso inay noqoto horjoogaha arimaha Soomaaliya ee geeska Africa.
Waxaa kale oo uu danaynayey in uu kala shaqeeyo Soomaaliya in dawlad dhexe ay oo aan Federal ahayn oo loo qaybiyo Waqooyi iyo Koonfur dibna u soo nooleysa ” Barnaamij Irir Weyne” ee uu ku mideysan yihiin Ismaaciil Jabuuti Siilaanyaha Reer waqooyi iyo Xasan sheikha.
Maxaa iska badelay ra’yigii shacabka Soomaaliyeed u qabtey Ismaciil Cumar Geele. • Waxaa iska badelay in ay garwaaqsadeen in madaxweynaha Jabuuti Isamaciil Cumar Geele yahay mid la kala saftay qabaa’ilada Soomaaliya sida Mucaadka Jabuuti ay qirayaan.
• In Dawlada jabuuti hormarkeedu ku jiro dawlad la’aanta Soomaaliya iyo kala fogeynta qabiilada soomaaliyeed oo laga dhex abuuro isbaheysi ku saleysan isir.
• In Soomaaliya ay noqoto badweyn laga wada kalluumeysto oo lagu baratamo.
Xaflada lagu maamuusayo Afka Soomaaliga ah oo isku badashey Aqoonsiga Soomaalida Waqooyi in laga dhaadhiciyo madaxda hada Soomaaliya hogaamisa.
Ismaciil Cumar Geele oo noqday madaxweynihii ugu horeeyey oo Aqoonsiga Soomaalida waqooyi u xayd xaytey cadeystayna in uu yahay dhex dhexaadiye Barnaamijka dib u soo nooleynta qabyaalada Soomaaliya ee lamagac baxdey “Irir Weyne”
Waxaa arintaa kuu cadeynaya Madaxweyne Geele oo si isku mid ah u soo dhaweeyey Silaanyo iyo Xasan sheikh oo aan ahayn laba qof oo u siman xaga title iyo isku Protocol ahayn taas oo u tusisay Soomaalida indho indheysa siyaasada Soomaaliya iyo khubarada caalamka in Soomaaliya ay dib u gashay Burbur iyo kala qeybsanaan halka laga filayey in ay isu timaado.
Federal Somalia iyo Caqabada hortaaga:
Waxaa Somaaliya xal loo arkey in ay xiligan qaadan karto federlizam kaas oo u ah xal waara madaama aysan jirin is aaminimo iyo isku kalsooni ka dib burburkii Soomaaliya soo gaarey 1991-2012.
Arimaha federalka waxaa caqabd ku ah Ismaciil Cumar Geele oo aan Maslaxadiisa ka waayey federalka boos uu ka soo galo, taas oo uu ku dhiiri galiyey safarkii Xasan Sheikh in Halsano lalaalo arimaha federaliga ah oo lagu macneeyey in dalku uu u baahan yahay in la wada nabadeeyo.
Hadii ay taasi hirgali weydo in Jubaland maamul u sameynteeda ay noqoto mid la hor istaago iyadoo lagu macneynayo dawlada ayaa soo dhisaysa waxaase arintaas fashil weyn ku keenay hadalkii Xasan sheikh ee uu kaga khudbeeyo Jabuuti safarkiisii ugu horeeyey ee ahaa
” Dawlada Walaaleheen ah ee Jabuuti uma joogto in ay nabadeyso oo kaliya Gobolka hiraan ee waxaa ay u joogtaa in ay maamul u sameyso”
hadalkaas oo ka hor imanaya Kenya uma sameyn karto maamul Jubooyinka oo isaguna ka soo yeeray Xasan sheikh Madaxweynaha Federal Somalia Government:
Sidee laysu waafajin karaa: ” Hamiga Geele iyo Humaaga Xasan iyo Hanqaltaaga Silaanyo .
Ismaciil Cumar Geele waxaa lagu tilmaamaa nin aad ugu hamiya in uu noqdo garwadeenka arimaha Soomaaliya, isagoo geed dheer iyo mid gaaban u fuulaya in madaxda soomaalidu ay noqdaan kuwo shidaal qaata Geele.
Waxaa Hamiga Geele ka mid ah in uu Soomaaliya ka dhigto mashruucyada hormarinta dawlada Jabuuti ee mustaqbalka fog iyadoo ay kuu cadeynayso codsiyada uu caalamka u gudbisaday iyo Programminta madaxa Soomaaliyeed isagoo kaga badalanaya doonitaankooda rabitaankooda aan muuqan.
Hamiga Geele waa mid ka sheegaya Soomaaliya waxaa ay noqoneysaa laba dawladood Somaaliya iyo Somalilan taas oo ay dantu tahay dib u soo nooleynta mashruuca isir wadaaga “Irir Weyne” oo sheegaya in Soomaaliya ay maamulaan Dadka ku abtirsada isirka Irir Weyne.
Humaaga Xasan Sheikh:
Xasan Sheikh oo haatan haya Xilka Soomaali wadaagto ayaa waxa uu u muuqdaa madaxweyne aan Soomaalida madaxweyne u wada ahayn madaama uu ilaa hada afkiisa ku kala kaxeeyey dadkii ayaamo ka hor isugu soo dhawaadey in ay noqdaa dawlad iyo dad qaranimadoodii dib u soo nooleeya ka dib 22 sano oo bur bur lagu soo jiray.
Waxaa lagu dhaariyey Xasan Dastuurka Federalisamka ee Soomaaliya ku heshiisay islana ogolaatey iyagoo aysan cidi ka maqneyn, lakiin hamiga Xasan waa ka soo horjeedaa waxa uu ku dhaartey oo waxaa uu doonayaa Somaali halmeel looga taliyo oo hal qof maamulo hal meel laga maamulo haldhinacna loo wada maamulo , halmeelna lawada dhiso iyo hal qolo ka wada fa’iideysato.
Ilaa iyo hada Xasan Sheikh waxaa laga hayaa Federal ma qaadan karto Soomaaliya aniguna waxaan ahay madaxweynihii Dawlada Federalka…………..?
Hamiga Xasan waxaa uu dhigayaa dadku waa anaga dalkuna waa anaga dawladnimaduna waa !!!!!! ?
Siilaanyo waa hogaamiya Soomaalida waqooyi iyo Xiriiriyaha arimaha siyaasada Irir Weyne oo runtii mudo hore laga soo bilaabay Gobolada waqooyi ee haatan u hanqaltaagaya in ay soomaaliya ka go’aan oo dawlad gooni ah noqdaan.
Waxa uu hanqaltaagiisu garowsiiyey in uu helikarin hanqaltaag kaligiii ee uu la kaashado dadka isirku kala dhexeeyo Irir Weyne oo mudo ka shaqeynayey.
Hanqaltaagu ma hirgalayaa hadii aan la xasuuqin dadka dega Sool iyo Sanaag oo iyagu ah dad mar walba lagu caburiiyo laguna cadaadiyo lana rabo in la xasuuqo marka u danbeysa.
Hadaba Soomaaliyey ka soo tala bixiya sidii hawshan laysu waa fajin lahaa iyadoo aan laxasuuqin dadka kale ee soomaliada ah madaama horey laysugu dayey 1991 markii saqiir iyo kabiir la xasuuqey ee weliba la bara kicieyey dalkii iyo duunyadoodiiba.
La soco Maqaalkan waxa uu noqon doonaa mid taxana ah oo bulshada Soomaaliyeed u iftiiminaya hagardaamada iyo huunbaa leynta Hamiga, Humaaga iyo Hanqaltaaga: “Irir weyne”